IJury ukuba imamele ityala lokuhlaselwa ngokwesondo komlindi wenqwelomoya yeAmerican Airlines
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Airlines » IJury ukuba imamele ityala lokuhlaselwa ngokwesondo komlindi wenqwelomoya yeAmerican Airlines
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • ulwaphulo-mthetho • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
.Inkundla iza kumamela ityala lokuhlaselwa ngokwesondo komlindi wenqwelomoya yeAmerican Airlines .
I-American Airlines iyasilela kwiinzame zokumisa ibango lokuhlaselwa ngokwesondo komlindi.
Isigwebo sikaJaji uKimberly Fitzpatrick siyakhaba zonke iinxalenye zesindululo sesigwebo esisisishwankathelo esifakwe nguMelika ebezama ukuphepha ukuvumela ijaji ukuba imamele ityala.
Ityala limiselwe yena kwi-342nd INkundla YeSithili YeNkundla NgoJanuwari 24, 2022.
Ityala likaKimberly Goesling libandakanya amabango okuxhatshazwa ngokwesondo, iyelenqe kunye nokuziphindezela.
Umlindi wenqwelomoya yeAmerican Airlines othi waxhatshazwa ngokwesondo ngumpheki osaziwayo oqeshwe yinkampani yeenqwelomoya uya kufumana ithuba lokubalisa ibali lakhe kwijaji, kulandela isigwebo esingundoqo sejaji yenkundla yesithili saseTarrant County.
Isigwebo, nguJaji uKimberly Fitzpatrick, siyakhaba zonke iinxalenye zesindululo sesishwankathelo sesigwebo esifakwe ngu. American Airlines eyayizama ukuphepha ukuvumela iqumrhu labachopheli-tyala ukuba lichophele ityala. Ityala limiselwe yena kwi-342nd INkundla yeSithili seNkundla kaJanuwari 24.
“Inkolelo yethu ibisoloko ikukuba xa ijaji eFort Worth lichophela eli tyala kwaye live ukuba kwenzeke ntoni kumxhasi wam – nendlela umMelika awamhoya ngayo aze aziphindezele kuye – baya kothuka,” litsho igqwetha uRobert Miller weMiller Bryant LLP. e Dallas, omele ummangali. "Esikhe sikufuna nje lithuba lokubalisa ibali lethu kwijury kwaye ngoku sinalo elo thuba."
Ummangali etyaleni, uKimberly Goesling we Fort Worth, waqala waxelela esidlangalaleni ibali lento eyenzekayo kuye - kunye nendima yaseMelika kuyo - kwividiyo ye-Facebook kunye ne-Instagram ka-2021 efikelele kubantu abangaphezu kwe-25,000.
UNksz Goesling, umlindi wenqwelomoya ophantse ube yi-30 yeminyaka American Airlines, unengxelo yomsebenzi embeka phakathi kweyona nkampani ibalaseleyo. Wayeyinkokeli yabasebenzi benqwelomoya kwaye esebenza kumaqela okugaya kunye noqeqesho kwinkampani yeenqwelomoya. Kangangezihlandlo ezininzi, wafumana uphononongo oluhle ngendlela awenza ngayo umsebenzi, nto leyo edla ngokuphumela kwizabelo ezikhethekileyo.
NgoJanuwari ka-2018, olunye uhambo olunjalo lwamsa eJamani, apho kunye nabanye abasebenzi be-American Airlines, wancedisa ukuphuhlisa imenyu ekhethekileyo yamazwe ngamazwe yabakhweli bokuqala kunye neshishini.
Kwakhona kolu hambo kwakukho umpheki odumileyo owaqeshwa nguMerika ngaphandle kokujonga imvelaphi kwaye waqhubeka esebenza nasemva kokuba efundile ngezityholo ezichasene naye zokusetyenziswa kakubi kotywala kunye nokuziphatha okungafanelekanga ngokwesondo, ngokutsho kwesimangalo. Ngobusuku bokugqibela beqela, umpheki wanyanzela ukuba angene kwigumbi lehotele likaNksz Goesling waza wamxhaphaza ngokwesondo. Uphando lwaseMelika kamva lwabonisa ukuba wavuma uhlaselo.
Xa wachaza ngolu hlaselo kwinkampani, abaphathi bathembisa ukumhlawula uNksz. Goesling ukuze afumane unyango baze bamvumele ukuba angabikho emsebenzini, njengoko kuyimfuneko. Abazange benze nto, endaweni yoko bamsusa kwisikhundla sakhe awayesinqwenela kwiqela elifuna abantu kwinqwelo-moya.
Ityala lakhe libandakanya amabango okuxhatshazwa ngokwesondo, iyelenqe kunye nokuziphindezela. Ityala nguKimberly Goesling v. American Airlines et al., Cause No. 342-314565-20 kwiNkundla yeSithili ye-342nd eTarrant County.